Mahad Salaad: Inaan Shaqadeyda Aado Waxaa Ii Diiday Ciidanka Dowladda, Rasaasna Waa Igu Rideen – Kalfadhi
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah mudanayaaha Golah Shacabka ayaa sheegya in xilli uu saaka isku diyaarinayay in uu aado xaruntooda Muqidsho ay is hor istaag ku sameeyeen ciidamo ka tirsan booliska.
Xildhibaanka ayaa bartiisa facebooga kusoo qoray hadalkaan.
“ Sharaf iyo karaamo ayaan u haynaa ciidamada qalabka sida, laakiin waa in ay dhowraan xorriyada isku socodka shacabka ah iyo xasaanadda dadka mas’uuliyiinta ah.
Gaariga ayaan kasoo dagay waxaanan ka codsaday in qoryaha askarta ay ka fuqaan iina ogolaadaan inaan la hadlo taliyehooda. Kadibna xabado ayaa nalugu riday. Mudo kadib ayaa waxaa noo yimid saraakiil boolis ah waxayna balan qaadeen in ay tilaabo ka qaadi doonaan askartii falkaan ka mas’uulka ahaa
Golaha Shacabka ayaa gudi usaaray muddo 48 saacadood ah in ay jawaab uga keenaan arintaan iyo arimo kale oo dhowr jeer soo laablaabtay oo lagula kacay Xildhibaanada.”
Guddoomiye Mursal: Askartu Waa In Ay Dhawraan Xasaanadda Xildhibaannada